shiinaha oo cambaareeyay mudaaharaadayaasha reer Hong Kong – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA shiinaha oo cambaareeyay mudaaharaadayaasha reer Hong Kong
Xafiiska arrimaha shiinaha ee Hong Kong ayaa Arbacadii cambaareeyay mudaaharaadayaasha reer Hong Kong inay yihiin “fayras siyaasadeed”, isagoo ka digaya in dhulku aanu waligiis xasilloonayn illaa laga saarayo mudaharaadayaasha.
Hadal qoraal ah, ayuu xafiiska ku tilmaamay dibad baxayaasha inay yihiin dad rabshado wata oo doonaya madaxbanaanida Hong Kong. Waxa ay sheegtay in Beijing aysan la fadhiisan doonin “xoogagga goos gooska ah ee meesha yaala” waxayna carrabka ku adkeysay in mas’uuliyadda ugu weyn ee Shiinaha ay tahay ilaalinta iyo kala dambeynta amniga qaranka.
Kadib todobaadyo xayiraad coronavirus ah, kooxo mudaaharaadyo ah ayaa bilaabay inay dib u soo baxaan, iyagoo dib u bilaabay olole billowday sannad ka hor ka dib markii ay dowladdu isku dayday inay riixdo sharciga hadda la dejiyay ee oggolaanaya in dadka loo diro maxkamad ku taal Shiinaha. Qabqabashada bishii la soo dhaafay qaar ka mid ah dadka u ololeeya dimuqraadiyadda dhulka ugu caansan ayaa sidoo kale ku dardaarmay mudaharaadyo cusub.
Qabanqaabiyeyaasha ayaa qorsheynaya socdaal Axadda wixii ku noqon kara mudaaharaadkii ugu horreeyay ee muhiim ah tan iyo markii uu dillaacay coronavirus. In kasta oo mudaaharaadayaashu aysan filayn inay fasax u helayaan dibad-baxan ayaa hadana dhalinyaro badani waxay sheegeen inay ka soo qayb-gali doonaan maadaama kontoroollada is-fogeynta bulshada ay is dejiyeen.
Talaadadii, siyaasiyiinta Shiinaha ee xulafada la ah ee Hong Kong oo uu hogaaminayo madaxii hore ee fulinta Tung Chee-hwa ayaa bilaabay Isbaheysiga Hong Kong, iyagoo ku baaqaya u hogaansanaanta “hal waddan, laba nidaam”, qaab dhismeedka la dejiyay markii gumeystaha Ingiriiska ee wakhtigaas. waxaa loo celiyay Shiinaha sanadkii 1997 waxaana la doonayaa in lagu bixiyo xorriyadda aan lagu arag meel kale oo Shiinaha ah.
Global Times, tabloid-dowlaha Shiinaha ayaa sheegay in isbahaysigu uu leeyahay 1,545 xubnood oo ka socda “dhammaan qaybaha nolosha” hadafka isbahaysiguna wuxuu ahaa “in Hong Kong ay mar kale guurto iyada oo dib loo soo nooleeyo dhaqaalaha iyo dib u soo celinta sharciga sharciga si kor loogu qaado maalgashadayaasha iyo sharciga. kalsoonida fulinta ee magaalada. “
Kooxda ayaa la shaqeyn doonta dowladda Hong Kong, ayay tiri. Ololaheeda ugu horreeya ee ugu weyn ayaa qaybinta wejiyada wajiyada ka leh 18 degmo oo dhulka ah Axadda iyo Isniinta.
Previous articleSheekh shariif oo teleefanka kula hadley safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya Amb Ben Fender
Next articleTirada dhimashada Mareykanka ayaa kor u dhaaftay 70,847, Coronavirus